Maxay Bisaduhu u Jecelyihiin Qolka Bath-ka?
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Waa maxay sababta bisaduhu u jecel yihiin musqusha?
2020 / 08 / 28 QoondayntaTilmaamaha qasabada 9766 0
Sababtoo ah hooyada ku faaneysa shan bisadood, waxaan aad ugu baraarugsanahay sida gebi ahaanba shakhsiyaadkoodu u kala duwanaan karaan. Halka aan haysto hal bisad oo kaliya ka cabi doonta saxanka biyaha qaarkood (xulasho, hubaal, huh ?!), kitty-kayga yar ee kala duwan marwalba marwalba wuxuu xiriir la leeyahay barkadaha qubeyska oo aanan sinaba ugu jirin booska si loo caddeeyo. Mar kasta oo aan raadinayo Little Mister, joojintayda ugu horreysa waa waqtiga qashinka oo dhan, iyo 9 jeer oo ka mid ah 10, wuxuu ku dhex nasanayaa tubbada dhexdeeda.
Caadi ahaan ku filan, Little Mister run ahaantii biyo ma jeclaan. In kasta oo aad suurtagal tahay inaad la soo baxdid dhowr iyo toban filim oo TikTok ah oo muujinaya bisadaha qubeysanaya milkiilayaasha gurigooda, Little Mister nasiib xumo maahan dhiirrigelintaas. Bedel ahaan, wuxuu jecel yahay inuu kusii fidiyo tubbada dhexdeeda oo ku faano sharaftiisa oo dhan halka ay igu barooraysaa ilaa aan isaga ka weydiyo.
Waxay u egtahay mid aan caadi ahayn, sax? Waxaan go'aansaday inaan helo waxa dhabta ah ee ka dambeeya jaceylkeyga kalgacal ee saxanka qubeyska, waxaan codsaday Dr. Zay Satchu, Bond Vet's cofounder iyo sarkaalka caafimaadka xoolaha, oo sheegay inuusan run ahaantii ahayn wax aan caadi aheyn! Horay ugu soco si laguu baro sababta koodhadhka qaarkood ay si fudud u jecel yihiin inay kursi ka galaan tubbada dhexdeeda.
My Cat nacaybka Biyaha, si kastaba ha ahaatee wuu jecel yahay suuliga. . . Waa maxay sababtu?
"Halka bisadaha badankood aysan jeclayn qoyan, inbadan waxay ku raaxaystaan ​​baaritaanka ama kaqeyb qaadashada biyaha weedhohooda gaarka ah - gaar ahaan biyaha ka qulqulaya qasabada," Dr. Satchu ayaa kula talisay POPSUGAR. "Waxaa laga yaabaa bisaddaada, inaad noqoto mid xiisaha leh oo aad u raadiso qubeyska sidii goobta ciyaarta ay runtii aad uga duwan tahay (oo aad u xiiso badan tahay!) Khibrada biyaha marka loo eego in lagu qabto roobka gudahiisa ama loo nuugo qubeyska."
Intaa waxaa sii dheer, Dr. Satchu wuxuu xusay inay runtii noqon karto rabitaan muuqaal ah, maadaama kitties-ka laga yaabo inay ka faa'iideystaan ​​dabaqa qabow, sibiibix ah. “Hadday bisaddaadu laalaaddo oo aaney walwal ku haynin tubbada dhexdeeda halka ay faaruq tahay, waxaa laga yaabaa inay si fudud ugu raaxaystaan ​​murugada dabaqa jilicsan iyo daawashada dadka oo ka soo gudbaya dabada saxanka qubayska, iyagoo ula dhaqmaya sidii dhuumasho raaxo leh dhibco ama hurdo raaxo leh, ”ayay tiri.
Muxuu catkeygu igu kalifayaa Markuu ku dhexjirtaa suuliga?
Ma jiraan wax aan runtii jeclahay oo ka weyn dhagaysiga dhammaan codadka yar yar ee kaftanka badan ee ay bisaduhu sameeyaan. In kasta oo Little Mister uusan caadiyan cod ahayn, haddana ma joojin doono "hadalka" halka uu ku nasto meeshuu jecel yahay. "Halka shakhsiyaadka badankood ay caadeysteen dhawaqa bisadaha ee baahsan ee u eg meowing iyo foodhida, bisaduhu waxay sameyn karaan dhawaqyo badan oo kale oo xiriir ah," Dr. Satchu ayaa qeexay.
Waxay caan ku tahay in sida caadiga ah codbixiyayaashu ay sameeyaan shanqar si ay milkiilayaashooda guryahooda u ogaadaan inay xanaaqsan yihiin “Cabaad, chirrup, ama trill waa buuq lagu qanco oo loo isticmaalo salaanta si laguugu qaddariyo mar kasta oo aad la sheekaysatid ama aad muujisid farxad (haddii ay dhacdo inay ku ciyaaraan toy ama digaagga daaqadda, tusaale ahaan) , ”Dr. Satchu ayaa xusay. Sidoo kale waa qeylada bisadaha hooyadu isticmaasho si ay bisadyadooda uga dhaadhiciso inay u hogaansamaan, marka qeylada ayaa laga yaabaa inay sifiican u noqoto qaabka bisadaada ay u weyddiisato tixgelin ama isku day ay kuugu muujiso hal shay. Markaa haddii bisaddaadu ka dhex guuxayso barkadda qubeyska, waxay u badan tahay inay waqtigooda ku baashaalayaan tubbada dhexdeeda! ”
Sii daynta bisaddaydu inay ku dhex dhexda musqusha miyaa habboon?
“Haddii ay dhacdo in bisaddaadu ka hesho dabaasha ama ay ka qayb qaadato tubbada dhexdeeda, si kasta ha noqotee, u oggolow iyaga inay taas ku dhammaystiraan dhiirrigelinta jireed iyo maskaxeed. Si fudud u hubso inaad iyaga kormeerto, hana ka tagin bisaddaada iyadoo aan ilaalinayn biyaha dhexdooda, ”ayay Dr. Satchu soo jeedisay. “Hubso in tubbada qubeyska laga daayay walxaha kiimikada (sida alaabta nadiifinta). Isku day inaad ku buuxiso barkada qubeyska meel sare bisadaada si raaxo leh u istaagi karto iyadoo madaxoodu ka sareeyo biyaha. ”
Si kastaba ha noqotee, haddii aad ogaato isbeddel lama filaan ah oo ku dhaca habdhaqankaaga kitty, waxaa ugu wanaagsan inaad weydiiso dhakhtarkaaga xoolaha talo bixin. "Haddii aad ka walwalsan tahay bisaddaada isla markiiba waqti dheeri ah inaad ku qaadato hurdo qubays madhan, waxaa laga yaabaa inaad ku saxsan tahay in isbeddel kasta oo dabeecadeed shaki ku jiro inuu sababo walaac," ayay tiri. “Bisaduhu si aad u wanaagsan ayey isu asturaan xanuunka iyo jirrada, sidaa darteed waqti dheeri ah oo aad ku qaadatid meel aad ku dhuumaaleysato sidoo kale waxay noqon kartaa habdhaqankaaga yar yar ee ah in la karantiilo Si kastaba ha noqotee tan u qaado macnaha guud ee dhaqankooda. Xirmadaadu si kastaba ha noqotee miyuu si xun wax u cunayaa, ka qayb qaadanayaa, iyo xaalad kasta oo kale nafsaddooda caadiga ah, mise waxay umuuqdaan xoogaa 'off'? Markaad shakiso, sinaba uma xanuunsaneyso inaad kujirto dhinaca la ilaaliyo oo aad ku magacawdo dhaqtarkaaga wixii dhaqan bedel ah. ”
Masaafada ma ku dhex jirtaa musqusha gudaheeda Dhaqanka Bisadda ee Dhaqanka loo yaqaan?
Halka aysan si caadi ah u ahayn bisaduhu inay ku raaxaystaan ​​inay ku dhex xirmaan tuubbada dhexdeeda, ama ay u dhowdahay biyaha si kasta oo ay u ixtiraamto, caadi ahaan waa nooc ka mid ah kuwa aan waxba galabsan ee lagu raaxeysto. "Waa wax aan caadi ahayn in bisaduhu ay jecel yihiin inay ku dhex jiraan tuubada ama inay qoyaan badanaa," ayay tiri. “Ma garan karno si sax ah sababta ama waxa ku dhaca fikirka bisadda ka dib markay qoyaan. Si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay inay bisadu dareento maamul la'aan ku dhex jirta tuubbada sibiibixda ah. Awoowayaasha bisadaha guriga ayaa ku soo kordhay cimilada oomanaha ah sidaasna waqti kuma qaadan dabaasha. Suufka qoyan ayaa suuragal ka dhigaya inay bisadu runti dareento culays, ka dhigaysa mid adag in la is hagaajiyo, ama ka dhigaysa mid sii waarta si loo xakameeyo heerkulka jirkooda.
In kasta oo heshiis lala galo nasashada bisaddaada way adkaan kartaa, waxaa jira qaar ka mid ah bisadaha guryaha leh oo u janjeera inay jeclaadaan dabaasha! "Noocyadan waxaa ku jira Maine Coons, Abyssinians, iyo Bengals," ayay la wadaagtay. “Waxaa la yaab leh, waxaa intaas sii dheer nooc loo yaqaan Turkish Van, oo leh jaakad aan biyaha u adkeysan karin jecelna inuu dabaasho. Si kastaba ha noqotee, dadka ku jira nooc ka mid ah ayaa ku kala duwanaan kara sida ay doorbidayaan, markaa bisadaada ha ku riixin inay dabaashaan ama ay ku ciyaaraan biyo haddii aysan u muuqan inay yihiin. ”
Hore:: Suuqa Sensor Faucet wuxuu abuuri doonaa Fursado Kobcin Cusub sanadka soo socda - StartupNG Next: Cilmi-baaristii ugu dambeysay ee Suuqa Silicon Brass Faucet 2020 Codsiga, Wadaagista Warshadaha, Isticmaalaha Dhammaadka leh ciyaartoy sare LIXIL, TOTO, Kohler, Delta Faucet, MOEN, iwm
2021 / 01 / 10 654
2021 / 01 / 10 455